Bulchiinsi magaalaa Finfinnee namoota daandii irra jiraatan kaasuuf hojii jalqabe - BBC News Afaan Oromoo
Bulchiinsi magaalaa Finfinnee namoota sababa garaagaraan daandii irra jiraatan kaasuuf hojii akka eegale Itti Aanaan kantiibaa magaalichaa Injiiner Taakkelee Uumaa himan.
Zarihun Baqqalaa jedhama. Jiraataa magaala Finfinnee naannoo Uraa'el yoo tahu waggoota sagaliif daandii irra jiraateera.
''Jireenyi daandii irraa baay'ee ulfaata. Beelli jira. Qorri jira. Namootni machaa'anii bakka rafnu dhufanii nu jeequ. Isaan waliin wal reebuun jira.''
Bulchiinsi magaalaa namoota daandii irra jiraatan daandii irraa kaasuuf kan jedhu baay'ee na gammachiiseera jedha.
Of danda'uun jireenya isaa jijjiruu akka barbaadus BBCtti himeera.
Namni biraa dubbisne tokko ammoo akkasuma yeroo dheeraaf mana namaa jala akka bulu himeera.
Guyyaa guyyaa hojii humnaa hojjetaa oolee galgala ammoo mana namaa jala akka bulu BBCtti hime.
''Halkan hattootni yeroo dhufan wal lolla. kaan waliinis bakka koo maaliif dhufte jechuun walitti buuna. Rakkoo hamaatu jira jedhe.''
Namni BBC'n dubbise kun galiin guyyaan hojii humnaa hojjetee argatu birrii 70 ykn 80 akka hin caalle himee, isumaayyuu hiriyoota isaa waamuun akka mana dhugaatiitti fixan hime.
Itti Anaan Kantiibaa Bulchinsa Magaalaa Finfinnee Injiiner Taakkalaa Uumaa namoota daandii irra jiraatan kuma 50 ol tahan kaasuuf karoorsanii hojjechaa jiraachuu isaanii himaniiru.
Karooricha galmaan gahuufis fandiin deeggarsa hawwaasumaa [Trust Fund] hundaa'uu himaniru.
''Jireenyi daandii irraa baay'ee ulfaata. Beelli jira. Qorri jira.''
Bulchiinsi magaala Finfinnees herreega baankii fandii deeggarsa hawwaasumaa qophaa'e irratti Birrii miiliyoona 100 galcheera.
Tirasti Fandiin deeggarsaaf qophaa'e kun bakka pirezidaantiin Itoophiyaa Saahilewarqi Zawudee jiranitti kan bamame yoo tahu dargaggota magaalichaa dabalatee lammiileen hundi deeggarsa gochuuf akka qophaa'uu qabanis Injiiner Taakkalaan dhaamaniiru.
Hoggansa siyaasaa fi mootummooleen naannoos dhimma kana irratti akka hirmaatan himaniiru.
Jigjiggaatti namoonni lama ajjeefaman
Dhaabbileen mootummaa fi miti mootummaas kallattii garaagaraan kan irratti hirmaatan taha.
Daandiin Qilleensaa Itoophiyaa tikkeettii tokko irraa Birrii tokko kutuun waggaatti Birrii miiliyoona 450 kan tahu galii kan godhu taha.
Dabalataan artistootni adda addaas konsartii qopheessuun galii argamu deeggarsa kanaaf akka oolchan himameera.
Torbee itti aanuu kaasee lammiileen daandiirra jiraatan kumni 50 daandirraa kaafamuun gara wiirtuuwwan qophaa'an jahaatti kan galfaman taha.
Hojichaan dubartootaa fi daa'immaniif duursi kan kennamu taha.
Buufataalee xiyyaaraa gurguddoo shanan Afriikaa keessaa
Wiirtuuwwan qophaa'an keessattis ogeessota fayyaa dabalatee namootni deeggarsa taasisan qophaa'aniiru.
Namootni daandii irra jiraatan qabeenya dhabuun qofa osoo hin taane sababa miidhama garaagaraa isaan mudateen jireenya isaanii dhabanii tahuu danda'a.
Kana malees erga daandii irra jiraachuu jalqabanii araada akka dhugaatii, maastishii xuuxuu(aarsuu), caatii qama'uu fi kaaniifis saaxilamuu danda'u.
Dabalataan miidhaan xiinsammuu isaan irra gahus danda'a. Yuunvarsiitii Finfinneetti Saayinsii Hawwaasummaan Kaadhimamaa PhD kan tahan Obbo Darajjee Baqqalaa namootni hedduun rakkina jalqaba manaa bahanii jireenya daandii irraa jalqaban qofa osoo hin taane erga daandii irra jiraachuu jalqabaniis rakkinoota hedduuf saaxilamuu danda'u jedhan.
Kana malees hanqina manaan daandii irra kan jiraatan malee namootni maatii hin qabnee fi galgaluma qofa bakka biraa oolanii dhufanii rafanis jiraachuu malu jedhan.
Kanaaf iyyuu mootummaanis rakkina amma qaban hiikuu fi walitti qabuu qofa osoo hin taane haala gaariin kunuunsuun itti dhiyaatanii rakkoo isaanii qorachuun akka isaan abdii horatanii bor jijjiramuu danda'an gochuu barbaachisa jedhan.
Dhaabbileen gurguddoon namoota kanneen leenjisuu danda'anii fi ogeessota qabanis cinatti barbaachisu jedhan Obbo Darajjeen.
Dabalataan yoo qorannoon deeggaramee akka ilaalchi isaanii jijjiramu hin hojjetamu tahe borus deebi'anii gara daandiitti bahuu danda'u jedhan.
Hawwaasni hundinuu irratti hirmaachuun hanga gadiitti yoo irratti hin hojjetamne namootni haaraanis durumaanuu yaadaa qaban ammas dhufuu danda'u jedhan Obbo Darajjeen.
Kanaan duras magaala Finfinnee keessaa namoota daandii irra jiraatan kaasuuf hojiin yeroo garaagaraatti jalqabus milkaa'aa hin turre.
Haala amma jalqabeen hojichi kan fiixaan bahu yoo tahe ammoo namootni daandii irra taa'anii akka hin kadhanne ni dhorkama.
Hospitallooonni gurguddoon Maagaalaa Finfinneetti argaman haala jiraattoonni daandiirraa wallaansa fayyaa bilisaa itti argatan hojjachuu eegalan.
Magaalaan Finfinnee akkuma kallattii hundaan bal'ataa jirtuun jiruufi jireenyi qonnaan bultoota Oromoo naannawashee haalaan miidhamaa, qe'eefi lafa ofiirraa buqqa'iinsii itti fufeera. Qonnaan bultoonni gamoon ijaarsa manneenii itti marsee haala keessatti argaman attamiin ibsu laata?
Mirga Oromoon Finfinnee gama diinagdee, afaaniifi aadaa isaatti fayyadamuu dhabe deebisuuf qabsoofna jedha- Waldaa Haaromsa Finfinnee.
Poolisiin Oromiyaa kanneen hokkora keessatti du'an sabaan adda baasee hime
Namoota du'an sabaan ibsuun kan barbaachiseef akka Komiishinar Araarsaan jedhanitti, "sabni tokko saba biraa akka waan ajjeeseetti, sabni tokko qabeenya saba biraa akka waan barbadeesseetti fakkeessanii ammas walitti bu'iinsa sabaa warri kaasuuf deeman waan jiraniifi."
Jawaar fi kaan wanni ittiin shakkaman 'ta'e jedhamee raawwatame' jedhan
Jawar Mohaammad dabalatee namoota ajjeefamuu Haacaaluu Hundeessaa hordofuun hidhamaniif gareen abukaatoo ogeeyyii seeraa 10 ta'an of keessaa qaba jedhame Jimaata Waxabajjii 10, 2020 maamiloota isaan wal arguu himeera.
Wal dura dhaabbannaa MM Abiy Ahimad fi Jawaar Mohaammad
Fulbaana 30 booda mootummaan MM Abiy 'bu'uura seeraa hin qabaatu' jechuun dubbataa kan ture Jawaar Mohaammad, erga MM Abiy Ahimad aangootti dhufanii as hogganoota siyaasaa maqaa guddaa qaban hidhaa bu'an keessaa tokko.
Qondaalli poolisii lammii gurraacha Ameerikaa mormarra jilbeeffachuun ukkaamsee ajjeese yeroo Joorji Filooyid hafuura baafachuu dadhabee wixxifatutti akka hin dubbanne dhorkaa turuu ragaaleen mana murtii mul'isan.
Mormii hawaasa Oromoo lafoo haga qilleensarraan
Hawaasni Oromoo Awustiraaliyaa magaalaa Melborn keessa jiran haala amma dura hin baramneen xiyyaaraan gargaaramuun ergaa dabarsaa mormiisaanii dhageessisan.
8 Adooleessa 2020
Sirni 'Nafxanyaa' bara 1974 wayita sirni mootii Hayilasillaasee kufee, Dargiin aangoo qabate dhumate, mootummaa amma jiruunis ta'e MM Abiy Ahimad waliin wanti walitti fidu hin jiru jedhe ibsi waajjira MM.
'Haacaaluu eenyutu ajjeese, ajjeesise kan jedhu hidda qaba'
Ajjeechaa artist Haacaaluu Hundeessaaatiin booda mormii dhalateen lubbuun namootaa badee, qabeenyaanis barbadaa'uu himameera. Kanaanis namoonni gocha kana keessaa harka qabu jedhamanii shakaman hdduu to'annoo jala oolfamaa jiru. Haala walii galaa ilaalchiisuun gama adeemsa seeraatiin sadarkaa maal irratti akka argamu Haatii Alangaa AddeeAdaanachu Habeebee BBC waliin turtii taasisaniiru. Kunooti.
'Sirni durii sun haqamu malee jijjiramnii dhugaa hin dhufu'
Artist Haacaaluu Hundeessaa torban darbee guyyaa Wiixataa erga namoota hinbeekamiineen ajjeefamee kaasee mormiin biyya keessaafi biyyoota alaatti gaggeefamaa jira. Ajjeechaa raawwatamee balaaleefachuun alatti kaayyoo guuddaan mirmiiwwan biyya alaaatti gaggeefamii maali laata?
Ajjeechaa Haacaaluun booda gaazexeessitoota kamtu hidhame, kamtu hin hidhamin?
Kanneen Hacaaluuf haqa gaafatan halluu diimaa maaliif filatani?
Tibbana Oromiyaatti miidhaan lubbuu namaafi qabeenyaarra gahe maali?